४ देखि ५ दिनमै सिक्न सकिन्छ महाकाली नाच (गुरु भक्तबहादुर घजु र रामकृष्ण वैद्यसँगको संवाद) — Bhaktapurpost.com
४ देखि ५ दिनमै सिक्न सकिन्छ महाकाली नाच (गुरु भक्तबहादुर घजु र रामकृष्ण वैद्यसँगको संवाद)
महाकाली नाचका गुरु भक्त बहादुर घजु र रामकृष्ण वैद्यसँग भक्तपुर पोस्टका लागि हिना सुवालले गरेको संवाद
जात्रा र पर्वमा धनी नेवा: समुदाय जात्रा सँगसँगै आफ्नो मौलिकता झल्काउने नाचहरु पनि प्रस्तुत गर्छन् । भैरव नाच, देवी नाच, महाकाली, बाराही नाच लगायत अन्य थुप्रै नाचहरु भक्तपुरमा नाच्ने/नचाइने गरिन्छ । यी नाचहरु विशेष गरी गाईजात्रा पछि निकालिन्छ र टोल–टोलमा प्रस्तुत गरिन्छ ।
विभिन्न नाचहरु मध्ये मध्यपुर थिमीको नगदेशबाट निकालिने महाकाली नाच पनि एकदमै रोचक र महत्वपूर्ण छ । यही नाचको विषयलाई लिएर विगत लामो समयदेखि नाचलाई अगाडि बढाउँन सक्रिय रहेका यसका गुरु भक्त बहादुर घजु र रामकृष्ण वैद्यसँग भक्तपुर पोस्टका लागि हिना सुवालले गरेको संवाद यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
महाकाली नाच कहिलेबाट शुरु भयो ?
खासमा यो नाच कहिलेबाट सुरु भयो भनेर हामीलाई पनि थाहा छैन । तर सुनेबुझे अनुसार भने मल्लकालबाट नै यसको शुरु भएको मानिन्छ । पहिले कसैलाई लेख्न नआएर नलेखेको होकि अथवा के हो जसले गर्दा आज हामीलाई समस्या भएको छ । जसले सोध्दा पनि थाहा छैन भनि जवाफ फर्काउनु पर्ने स्थिति हुन्छ । (हाँस्दै)
यो नाच सिकाउन कति समय लाग्छ ?
त्यो पनि सिक्नेमै भर पर्छ । यदि कलाकारहरुले इच्छा राखेर सिक्यो, ४ देखि ५ दिनमै पनि सिक्न सकिन्छ । यदि छैन भने त हप्तौ पनि लाग्छ । मुख्य कुरो भनेको इच्छाशक्ति नै हो ।
महाकाली नाचमा कतिदेखि कति उमेर समूहका गणनाच (नाच्ने कलाकार) हुन्छन् ?
यस नाचको लागि उमेर चाहिदैन, इच्छाशक्ति भए पुग्छ । जसलाई मन लाग्छ, उसले सिक्न सकिन्छ । अहिले आउँदो गाईजात्रालाई निकालिने नाचमा भने १० देखि ३० वर्ष उमेर सम्मका छन् । उनीहरुलाई अहिले स्वस्थानी वैद्यले सिकाउदै गरिएको छ । उनले पहिले महाकाली बनेर महाकाली नाच नाचिसकेका छन् ।
नाचमा कति जना गणनाचहरु हुन्छन् ?
महाकाली, महालक्ष्मी, कुमारी, सिंह–१, बेतं–४, भूत भैरव–२, कवां–२, ख्यां–२, माकं २, दैत्य १, मयूर १ गरी जम्मा १९ जना रहेका हुन्छन् ।
नाचको लागि के–के आवश्यक पर्दछ ? आवश्यकता अनुसार कहाँबाट रकम जुटाउनु हुन्छ ?
पहिले त मौलिकता झल्किने आवश्यक पोशाक र बाजागाँजा नै हो । यो हामीसँग पर्याप्त मात्रामा छ । अन्य कुरा भनेको नाच निकालिसकेपछि ४ दिन नगदेशको सबै टोलमा नाच देखाउनु पर्दछ र साथै भोज पनि गर्नुपर्छ । भोजको लागि टोलबासीहरुले सहयोग गर्छन । अहिलेसम्म त्यस्तो आर्थिक समस्या भने आएको छैन । फेरि हामीले यसको लागि एउटा कोष पनि स्थापना गरेका छौं ।
बाजा चाहिं कति थरिको बजाइन्छ ?
महाकाली नाचमा धेरै परम्परागत बाजाहरु बजाइन्छ । जस्तैः धाः, , खिंङ, म्वाली, पछिम्मा, ललांखिङ, नाय्रखिङ, भुस्या, ताः, झ्याली आदि ।
अन्त्यमा, महाकाली नाच किन नचाइन्छ भन्ने कुरा बताइदिनुस ।
मल्लकालीन समयमा नगदेशका जनताहरुलाई दैत्यहरुले धेरै सताउने गर्थे । सहरमा अनिकाल नै मच्चिएको थियो । पानी नपर्ने, जनताहरुलाई विभिन्न रोग लाग्ने, जति उपचार गर्दा पनि निको नहुने, बाली नष्ट हुने आदि समस्याले ग्रस्त बनाएको थियो । अन्त्यमा महाकाली स्वयम प्रकट भई ती दैत्यहरुसँग सामना गर्नुभयो । महाकालीले ती दैत्यहरुलाई लडाई गरी हराएपछि सहरमा उत्सव छायो । त्यही उत्सवको खुशियालीमा नै महाकाली नाच नचाइएको हो । यो नाच हुन त अरु टोलबाट पनि निकालिने गरिएको छ । तर, तिनीहरुलाई पनि यहीकै गुरुले सिकाइएको हो ।